Mgbe ahụ mgbe ha na-ede a graphic isiokwu akwụkwọ e dere ọrụ e nwere di na nwunye nke ihe na-atụle n'ihu hopping na na na-enwe ike iji na-ewe ihe na-agbahapụ ya na a kọwaa. Ịdị na-akpọtụrụ na ụdị ịkọwa mgbe nwere ike a na-eche ngafe nke na ịbụ ókè otutu enweghị tinyere na ohere maka ọrụ n'ezie ibu animated. Omenala e nwere otu di na nwunye nzọụkwụ nwere ike ejideghi na a kpọmkwem ọgwụgwụ ihe mgbaru ọsọ na-eme ka expositions na isiokwu ihe ndị a ga-abata na elu nwale.
N'agbanyeghị nke a kpuchie, e nwere ihe na-ekwesịghị-ekwe omume welie ọdịdị nke akwụkwọ mejupụtara n'akụkụ ụfọdụ exposition themes ịtụgharị uche kwupụta isiokwu uche.
Nga ide akwụkwọ
Nkume ohere ime ihe ndekọ
Dodging na ighota
Nga-ede Ọmụmụ Writing edemede
Nwere ike inwe ụfọdụ bara uru metụtara nke nwere understudy echeta ihe ha na-ide. Ụfọdụ n'ime oge ndị e dere arụ ọrụ nwere ike na-amalite na ya ga-ewu, ma na a na-aga na-understudy agaghị adịghị ahụ, Otú ọ dị ihe owuwu nwere ike mgbe niile na-onwe ya ma ọ bụrụ na iyi na-hụrụ na ọ ga-gaba na-amalite na-a obere bit ọsọ dị ka a òkè nke ihe ndị ga--esonyere n'ime Ọdịdị nke Archive.
Na-egosi na ọ dị ihe ọzọ gbanwee ka mere na-ekwe nkwa na e nwere ike ịbụ ihe ole na ole ná gụnyere a na-Agbaghara na ụfọdụ euphoric graphic mmiri na ike-gụnyere.
Space bụ bara uru na Ọmụmụ Writing
Inside ndekọ, ewu ya na-enweghị ekele maka ohere ma ọ bụ na-eleda ohere ya onwe ya na a kpọkọtara ga nwere uru na ihe ole na ole dị njọ. Kachanụ akwụkwọ ga mkpa ụfọdụ ohere na-niile ọnụ maka ya nchepụta a hụrụ.
Idebe pụọ n'agbụ
Nke a na-zoro aka bụ n'elu ọgwụgwụ nke otu isi. Nke a ga-akpali ndị e dere ọrụ mbịne n'ime a tad bit umengwụ na-agwụ ike na peruse. Ozugbo bụ mgbe nile-ezuru a kọwaa ma e nwere ihe ọzọ oyi akwa na-kwuru. Ọzọkwa, anya isi nke a bụ ikpe, mgbe ahụ na e na-ihe ọzọ na-ike mmasị nso site Otú ọ dị mgbe nile, agbalị kwa ike ga-akpali ndị ọzọ fiasco.
A List Of Topic N'ihi edemede
Onye ọ bụla n'ime ndị a n'isiokwu na-achị maka ọkà mmụta mejupụtara nwere ike gwuru n'ihi ọzọ data na na onye zuru mara mma na onye kere ike na-enye gị a push.
« (4 Atụmatụ) Olee otú dee edemede zuru okè?
Weere Factors Iji Nwee a Great Private mejupụtara Author »